ग्रीन जानुहोस्: s तरीकाहरू सीडी र डिभिडिहरू रोक्न Martech Zone
सोमबार, अगस्ट 25, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
EPA अनुसार, .5.5. million मिलियन सीडीहरू, उनीहरूको प्याकेजि and र लाखौं अन्य संगीत सीडीहरू रिसाइक्लि without बिना नै प्रत्येक वर्ष फ्याँकिएका छन्। सीडीहरू र डीभीडीहरू एल्युमिनियम, गोल्ड, रyes्ग, विभिन्न अन्य सामग्रीहरू बाट बनेका हुन्छन् - तर सबै पोलिक कार्बोनेट र लाखा। पोलीकार्बोनेट र लाह कच्चा तेलबाट सिधै उत्पादन गरिन्छ।
तथ्या .्कहरू जारी रहन्छ, प्रत्येक महिना १०,००,००० पाउंड सीडी र डीभीडी पनि अप्रचलित हुन्छन्। या त सामग्री पुनर्चक्रिया को कुनै प्रभावी माध्यम छैन! यस अनुसार तेल उद्योग आफैंमा, प्रत्येक ब्यारेलको लगभग १.१ गैलन (g२ गैलन) तेल पेट्रो रसायनमा जान्छ।
म यो क्लाउड कम्प्युटि toको साथ स्विच गर्ने बगैँ, त्यसो नभएमा जान्छु भर्चुअलाइज्ड सर्भरहरू र सफ्टवेयरको सेवा अनुप्रयोगको रूपमा सदस्यताले वातावरणलाई वास्तवमा मद्दत गर्दछ। मलाई पक्का विश्वास छैन कि तेलको ब्यारेलको कुन प्रतिशत कम्प्याक्ट डिस्कहरूको सिर्जनामा ​​जान्छ, तर निश्चित रूपमा हामी डिस्क ड्राइभको सट्टा फाइल साझेदारीको लागि युएसबी ड्राइभहरू र नेटवर्कहरू प्रयोग गरेर धेरै बढी कुशल हुन सक्छौं।
साथै प्रयोग डिस्कहरू, म मद्दत गर्न सक्दिन तर सोच्दछु कि त्यहाँ धेरै ऊर्जा छ र ती डिस्कहरूको निर्माण र परिवहन गर्न अनावश्यक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। निश्चित रूपमा प्लास्टिकको लागि ब्यान्डविड्थ स्वैपिंगले मानवताको लागि सकरात्मक परिणाम निम्त्याउँछ, हैन? म त्यहाँ छन् महसुस धेरै अन्य कुरा त्यो एक ठूलो भूमिका खेल्छ, तर किन कसैले यो अनावश्यक उद्योगको बारेमा कुरा गर्दैन?
म किन प्रयोग गरिदै छक्कछु एक सेवा रूपमा सफ्टवेयर को कुञ्जी घटक होईन हरियो जाँदै छ व्यवसायलाई सल्लाह दिनुहुन्छ? टेराबाइट हार्ड ड्राइभहरू, USB ड्राइभहरू, अनलाइन ब्याकअपहरू ... यी सबै कसैको लागि सजीलो पहुँच योग्य छन्। कसैले पनि सीडी र डीभीडी किन्नु हुँदैन। म अब डिभिडि फिल्महरू पनि भाँडामा लिन्न, म तिनीहरूलाई भाडामा दिन्छु AppleTV!
CD विचारहरू तपाइँको सीडी लत को रोक्न
सेवाको रूपमा सफ्टवेयरमा स्विच गर्नुहोस्। उदाहरणहरू: गुगल अनुप्रयोगहरूको लागि माइक्रोसफ्ट अफिस र सेल्सफोर्सका लागि माइक्रोसफ्ट सीआरएम डम्प गर्नुहोस्। कुनै स्थापनाहरू, कुनै ब्याकअपहरू छैनन्, हार्डवेयर छैन ... केवल एक ब्राउजर!
भाँडा डिभिडिहरू र संगीत सीडीहरू खरीद गर्न तपाईंको संगीत खरीदहरू वा यसका साथ फिल्म भाडा डाउनलोड गर्नका लागि स्विच गर्नुहोस् iTunes, AppleTV र अन्य प्रीमियम सेवाहरू। आईट्यून्सले उनीहरूको लोगोमा पुन: विचार गर्नुपर्दछ!
सीडी र डीभीडीहरूमा डाटा ब्याक अप र USB ड्राइभहरू लाई ट्रान्सफर गर्नबाट स्विच गर्नुहोस्। USB ड्राइभले अधिक डाटा समात्छ र पोर्टेबल, छिटो, र थकित हुँदैन। (यद्यपि होशियार हुनुहोस्, सबै यूएसबी ड्राइभहरू समान बनाइएको छैन!) आफैंलाई एक ठूलो पोर्टेबल ड्राइभ किन्नुहोस् तपाईंको कामलाई ब्याक अप गर्नका लागि र यसलाई अगाडि काममा पुर्‍याउनका लागि। म बिना कहिँ पनि जान्छु पश्चिमी डिजिटल पासपोर्ट, यो मैले गरेको सब भन्दा राम्रो लगानी हो!
अनलाइन सासा विक्रेताहरू मार्फत अन्य कम्पनीहरूमा ठूला फाइलहरू स्थानान्तरण गर्नुहोस् DropSend, YouSendIt, SendThisFile, MailBigFile, र पठाउनुहोस्स्पेस.
तपाईंको CD र DVD ड्राइभबाट छुटकारा पाउनुहोस्। जब तपाईं आफ्नो अर्को ल्यापटप अर्डर, खरीद संग एक समावेश छैन। जब तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको कार्यालयको लागि आदेश दिनुहुन्छ, केही पैसा बचत गर्नुहोस् र USB ड्राइभहरू खरीद गर्नुहोस् तपाईंको DVD लेखक अपग्रेड गर्नुको सट्टा। तिनीहरूलाई पहुँचयोग्य नहुनाले, तपाईं अर्को सीडी बर्न र बर्न कम सम्भावना हुनुहुनेछ!
वास्तवमा, म किन अब सीडी प्रयोग गर्दछ एक मात्र कारण सीडी मा पुस्तकहरु को लागी वा मेरो ड्राइभ को लागि काम गर्न र बाट संगीत जलाउनु हो। मैले मूल्यहरू हेरिरहेको छु, यद्यपि, र म प्रतिस्थापन कार स्टेरियो प्राप्त गर्न सक्दछु जुनसँग एक USB इनपुट साथै आईपड नियन्त्रणहरू than २०० भन्दा कमको लागि! हुनसक्छ यो मेरोलागि समय हो!
निing: पुन: प्राप्ति र ढाँचा एपीआई प्रश्नहरू
अगस्ट,, २०१ 28 2008:२१ अपराह्न
मानिस, मैले यो महसुस गरेन कि हामी सबैले वास्तवमै सीडीहरू र डीभीडीहरू प्रयोग गर्दछौं जब सम्म मैले तपाईंको पोष्ट पढ्दिनँ। जे होस् म गर्वसाथ भन्न सक्दछु कि मैले पहिले नै तपाईंको सूचीमा #s १, and र do गरें!